साझा अनलाईन २०७८ भाद्र ११ गते मा प्रकाशित 105 पटक पढिएको
नेपाली काँग्रेसकाे १४ ओैँ महाधिवेशनकाे तयारीका लागि उप-सभापति विमलेन्द्र निधिकाे सम्पर्क कार्यालयकाे आज एक कार्यक्रमका बिच शुभारम्भ भएकाे छ । १४ ओैँ महाधिवेशनकाे तयारीका लागि भनेर निकै प्रचारप्रसार गरी सम्पर्क कार्यालय खाेल्ने विमलेन्द्र निधि पहिलाे नेता भएका छन् । यद्यपि नेपाली काँग्रेसमा सभापतिका आकांक्षी धेरै नै छन् । कतिकाे आन्तरिक कार्यालय खुले पनि यस किसिमकाे प्रचार गरिएकाे छैन ।
विभिन्न मन्दिरका पुजारीका प्रख्यात पुजारी ल्याएर सम्पर्क कार्यालय खाेल्नुलाई धेरैले रहस्यका रूपमा लिएका छन् । धर्म निरपेक्षताका पक्षपाती निधिले मन्दिरका पुजारी किन ल्याए त ? के विमलेन्द्र निधि हिन्दु राष्ट्रकाे पक्षमा आइसकेका हुन् कि भारतीय जनता पार्टीकाे मन्त्र छ ? विभिन्न आँकलन गरिएकाे छ । जे हाेस् विमलेन्द्र निधिले १४ ओैँ महाधिवेशनमा सभापतिकाे उम्मेद्वार हुने कुराबाट पछि नहट्ने सङ्केत भने पक्कै दिएका हुन् ।
सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास-पात्र मानिने विमलेन्द्र निधिले सभापतिमा उठ्ने भनेर सम्पर्क कार्यालय नै शुभारम्भ गरेपछि काँग्रेस वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरेकाे छ । निधि भने काँग्रेसलाई मजबुत बनाउन र सबैलाई समेटेर जान आफ्नाे उम्मेद्वारी रहेकाे बताउँछन् ।
२०७८ भाद्र ११ गते मा प्रकाशित